यी भाग्यशाली जसले जिते हुन्डाइको आइ २० गाडी, अरु कस्ले के जिते ? – Clickmandu
यी भाग्यशाली जसले जिते हुन्डाइको आइ २० गाडी, अरु कस्ले के जिते ?
क्लिकमान्डु २०७६ जेठ २६ गते १७:५० मा प्रकाशित
काठमाडौं । हुन्डाइ अटोमोबाइल्सको नेपालका आधिकारीक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले एक समारो हुण्डाई फेष्टिभ डिलाइट२०७५ का बम्पर विजेताहरुलाई पुरस्कृत गरेको छ ।
हुण्डाइको नक्साल शोरुममा भएको समारोहमा लक्ष्मी समूहका अध्यक्ष गणेश बहादुर श्रेष्ठले विजयीहरुः बद्रिकुमार खड्का (कुपन नं. १६२२) लाई क्रेटाको साँचो तथा भावना के.सि.(कुपन नं.९०६) लाई आइ २० एक्टिभको साँचो हस्तान्तरण गरे ।
उक्त समारोहमा लक्ष्मी समूहका अध्यक्ष गणेश बहादुर श्रेष्ठ, विमला खनाल (अध्यक्ष–कञ्जुमर आई नेपाल) तथा सुश्री नैन्सी बोगटी (हुण्डाई मिस फ्रेण्डशीप २०१९ विजेता) को पनि उपस्थिति थियो ।
लक्की ड्र को विजेताहरुको छनौट ५ मे, २०१९मा हिमालया टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो । बम्पर लक्की ड्र को विजेताहरुको छनौट कार्यक्रमका मुख्य अतिथि विमला खनाल अध्यक्ष- कञ्जुमर आई नेपालसहित श्रृंखला खतिवडा (मिस नेपाल २०१८)ले गरेकी थिइन् ।
त्यसैगरी, १० ग्राम सुन जित्ने १०० जना भाग्यशाली विजेताहरुको छनौट श्रीमती विमला खनालले कञ्जुमर आई नेपालको अनामनगरस्थित कार्यलयमा गरेका थिए ।
हुण्डाई फेष्टिभ डिलाइट २०७५अन्तर्गत हुण्डाइ खरिदकर्ताहरुले एक थान क्रेटा, एक थान आइ २० एक्टिभ, १०० जनाले १० ग्राम सुन सहित स्क्र्याच कार्ड मार्फत१ लाख रुपैयाँसम्मको नगद छुट पनि प्राप्त गरे ।
सम्पूर्ण विजेताहरुलाई बधाई दिदै लक्ष्मी समूहका अध्यक्ष श्रेष्ठले हुण्डाईलाई नेपालकै सर्वोत्कृष्ट ब्राण्ड बनाउन सहयोग गर्नुहुने आफ्ना सम्पूर्ण गा्रहकहरुप्रति आभार व्यक्त गरे ।
सबै हुन्डाईका गाडीहरुमा ३ वर्ष वारेन्टी, ४ वर्ष फ्रि सर्भिसिङका साथै निःशुल्क सवारी कर भुक्तानी सहित उपलब्ध छन् । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले नेपाल भरी १५ शोेरुमहरु तथा १७ सर्भिस सेन्टरहरु मार्फत ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
हुण्डाई मोटर कम्पनी विश्वकै ५ ठूला अटोमावाइल उत्पादक मध्येमा पर्दछ । यस कम्पनीका उत्कृष्ट उत्पादनहरुले विश्वभरि करोडौं ग्राहकहरुको मन तथा विश्वास जित्न सफल भएको कम्पनीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
शेखर गोल्छा र किशोर प्रधानको टिमलेमात्रै निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नसक्छः कुशकुमार जोशी
नेपालमै बन्न थाल्यो टीभीएस मोटरसाइकल, मूल्य कति सस्तो पर्छ ? (फोटो फिचरसहित)